China Baseball Stadiums Lights Amazon China Manufacturers & Suppliers & Factory
Baseball Stadiums Lights Amazon - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 22 Ngwaahịa maka Baseball Stadiums Lights Amazon)
Elu Bay Industrial Led Shop Lights Fixtures 150W
The High Bay Fixtures 150w bụ 130lm / w na 19500 lumens. Anyị 150w High Bay Industrial Led Light nwere ike dochie 400W HPS MH HID. Ebube echichi maka nke a dị elu 150w bụ 5-7m. Nke a dị elu n'ọnụ mmiri na-eduga klas akpa bụ EC ROHS ETL DLC. Elu mmiri dị elu na-eme ka ihe dị ọkụ eji mee ihe maka ụlọ nkwakọba ihe,...
150W Led Warehouse Retrofit Lights 19500lm
Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ 150W bụ 130lm / w na 19500 lumens. Ngwa igwe 150w anyị na-ekpuchi Amazon nwere ike dochie 400W HPS MH HID. Ebe echichi dị elu maka Ụlọ Nzukọ Ulo Puerto Rico bụ 5-7m. Ụlọ ọrụ ụlọ nkwakọba ihe anyị nwere ike iji maka ime ụlọ na n'èzí. Nke a mere ka ụlọ ọkụre halifax ejiri maka ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ...
300W Led Parking Lot Lights with Photocell 5000K
Anyị 300w Na-ejide Mpempe Ogwe Ọdụm bụ 130lm / w na 39000lm na nke a na-echekwa Led na Leta na Photocell ga-eme ka ebe ndị na-adọba ụgbọala na-abanye ruo mgbe chi bọrọ. Lithonia jidere ụgbọala mpempe ụgbọala nke ọkụ 300w na-anọchite anya HPS / HID 10 00 watt. Nke a na-eme ka ọtụtụ ogwe ọkụ na-adọba ụgbọala bụ Ụdị...
150W UFO Led Warehosue Lights 5000K
150W UFO Led Warehosue Lights 5000K 1. 150W na - eme ka ìhè dị elu na - emepe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2. 150W Ufo elu n'ọnụ mmiri ọkụ IP65 waterproof maka n'èzí eji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. 150W ufo elubay bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na ibu,...
AC100-277V 100W Led Canopy Lights 5000K
Inye Ike: 1000pcs a week
AC100-277V 100W Led Canopy Lights 5000K Ebube 100W anyị na- eji ọkụ na- eme ihe dị mma 3030 Diana Chip, nwere ike iguzogide mgbochi dị elu ma kesaa ìhè. Nke a Led Petrol Station Lamp na- eji ọkwọ ụgbọ elu dị elu, ya na asambodo CE ROHS abd afọ atọ. Ebe anyị na-anọ n'ọdụ ụgbọ mmiri na-enwu eji nkà na ụzụ ọhụụ...
130W Led Canopy Lights 5000K Anyị L ed Gas Station kanopi Ìhè eji h igh quality 3030 ikanam Mgbawa, nwere ike imeri elu mgbochi static ma kesaa ihe ihie. Nke a Led Petrol Station Light na- eji ọkwọ ụgbọ elu dị elu, na-agba akwụkwọ CE ROHS abd afọ atọ. Anyị Dugara Retrofit kanopi Ìhè eji ọhụrụ duru technology,...
240W Photocell Sensor Outdoor Shoebox Street Lights
240W Photocell Sensor Outdoor Shoebox Street Lights NKWU NDỊ ỌZỌ: Bbier na- edu okporo ámá akpụkpọ ụkwụ ìhè nnukwu na-egbuke egbuke na elu lumens irè 135lm / watt, 700W HPS / MH nnọchi. OWU OTU: Bbier na- eduzi ogwe osisi dị mma maka nchịkọta ọkpụkpụ dị mma maka afọ 50,000 nke ndụ. MGBE A GA-EKWU: Bbier Led shoebox...
1000W N'èzí n'ọdụ ụgbọ elu Baseball
MGBE OZIRI OZIRI - Nchacha ọkụ maka Egwuregwu mmepụta nke 130Lm / W! Ike nke oma, obere oriri 2018 Ekele - N'èzí Egwuregwu Egwuregwu ezigbo nsụgharị igwe, okpomọkụ, na ịdị mma hụ na ndị na-eme egwuregwu nwere nlezianya anya n'ọhịa MGBE ECHICHE NDỊ MGBE NTỤTA - Ngwá ọkụ na-egbuke egbuke na-ekpo ọkụ ọkụ, iji...
800W N'èzí Arena Lights Bọọlụ Nkata Bred Lighting
Anyị 800w N'èzí Arena Anya dị mma maka ime ụlọ na n'èzí na-enye gị ìhè na nchekwa n'abalị. Ndị a N'èzí Court Lighting ike ga-eji na ubi, yaadị, ogige ntụrụndụ, bọọdụ mkpọsa, ụlọ mmega ahụ, okporo ụzọ, n'okporo ámá, n'ámá, ụlọ mmepụta ihe wdg With 120 Celsius doo n'akuku, na 800w Nkata Court...
Ihe DLC anyị nwere ike ịkwanyere ebe a na-emepụta ogwe ọkụ na ogwe osisi nwere oke ọrụ zuru oke maka ugbo, yard, ụgbọala, ụzọ ụkwụ, ihe owuwu ụzọ mbata na ịzụ ahịa. Mmiri a zuru ezu 320W 480 Volt Led Pole Lights yiri otu puku ọkụ ọkụ nke 1000W. The 320w Led Roadway Light bụ d usk ka ụtụtụ photocell arụnyere. Gbanyụọ...
80W Industrial Led Wall Pack Lights 5000K
Min. Nhazi: 50 Piece/Pieces
Bbier 80W Wall Pack ọkụ bụ nke na-egbuke egbuke aluminum, nke na-akụda na-eguzogide eguzogide, oke okpomọkụ ana-anwale ma nwee ike ijikwa ọnọdụ ihu igwe niile. Nke a na-eme ka anyị na- arụ ọrụ Wall Wall nke zuru oke na-eme ka ihe nkedo ọkụ maka ụlọ na ebe dị n'èzí. Ihe ngosi IP6565 na-eme ka a hụ Lamp anyị nwere...
1200W Gym Lights Hed 3500W
Ọnụ ọgụgụ ndụ nke ikanam bụ ihe karịrị narị awa 50000, Gym Light 1200W nwere ike ịzọpụta ọ bụghị naanị ụgwọ nke oriọna, kama ọ pụkwara ibelata ụgwọ akwụ ụgwọ. Egwuregwu Gym anyị gafere EC, akwụkwọ ikikere ROHS ka e wee nwee nchedo nchedo. Anyị 1200w mgbatị Ìhè Dugara abịa na Ogige dị elu 120 ° na 156000 Ọhụụ ìhè...
100W Led Landscape Area Lights 5000K agba ọla
Ekele 100w na Mpaghara edepụtara ya maka awa 50,000, jiri nwayọọ na nchara lampshade nye ebe dị mma maka ikpo ọkụ. Nke a Egwurugwu Gburugburu Ebe E Si Nweta Akwụsịrị na-adaba na nkedo 2 3 / 8in, ihe nkedo gụnyere. Enwere ike iji anya ọkụ na- ekpuchi 5000K Led maka ọkụ ọkụ, ụlọ ọrụ, ogige, ebe egwuregwu na ebe ndị...
400W Led Baseball Field Stadium Lights 52000lm
Na SMD 3030 LED, nke a 400W Baseball Field Lights na -eme ka elu 52000lm dị elu (1200W Ebube Kwesịrị Ekwesị) ma zọpụta 88% na ọkụ eletrik nke ọkụ. Egwuregwu Mkpụrụ Egwuregwu Baseball anyị bụ onyinyo n'enweghị onyinyo ma na-egbukepụ ọkụ, na-enye ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-agbakwunye ụlọ gị n'enweghị...
300W Led Football Stadium Sport Lights
BỤGHỊ ỤBỌCHỊ NKE BỤ: Bbier 300W Football Stadium Lights output of 130Lm / W! Ike nke oma, obere oriri. 2018 EKWESỊRỤ: Led Stadium Lights mara mma na nsụgharị nsụgharị, okpomọkụ, na ịdị n'otu hụ na ndị na-eme egwuregwu nwere echiche doro anya na ubi MGBE ECHICHE NDỊ MGBE NTỤKWU: Ịkụnye ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ...
Baseball Stadiums Lights Amazon Led Baseball Stadiums Lights Led Stadium Light Amazon led wall pack lights amazon Atlanta Stadium Lighting Solar Street Light Amazon 400w Led Stadium Light 1000 Watt Led Stadium Light